किन मेरो बिरालोको पछाडिको खुट्टा विफल हुन्छ Noti बिरालाहरू
किन मेरो बिरालोको पछाडिको खुट्टा असफल हुँदैछ? सत्य यो हो कि यो सोच्न पनि अत्यन्त चिन्ताजनक छ, किनकि यसको मतलब यो हो कि तपाईंको सबैभन्दा राम्रो प्यारी साथीसँग केहि गलत छ र उसलाई सकेसम्म चाँडो मद्दत चाहिन्छ।
यस कुरालाई ध्यानमा राख्दै हामी तपाईलाई सम्भावित कारणहरू र उनीहरूको उपचार के हो भनेर बताउन सक्छौ ताकि तपाईलाई आफ्नो बिरालालाई कसरी सहयोग गर्ने भनेर तपाईलाई थाहा छ।
1 के कारणहरू छन्?
1.1 हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी
1.3 हिप डिसप्लासिया
1.4 पुरानो कब्ज
1.6 अन्य कारणहरू
2 तपाईंलाई मद्दत गर्न के गर्ने?
3 किन मेरो बिरालो अनौठो हिंड्छ
3.1 अटाक्सिया: स्ट्यागर सिन्ड्रोम
3.2 Claudication: लंगडाई वा लंगडाई
4 के गर्ने यदि मेरो बिरालो अनौठो छ?
के कारणहरू छन्?
हिंड्ने समस्याको साथ तपाईंको बिरालालाई हेरेर सुखद छैन। जब उनी यो अवस्थामा पुग्छन्, उसले दिनको धेरैजसो एउटा कुनामा लुकाउँछ, सूचीविहीन। तपाईलाई राम्रो बनाउन मद्दतको लागि, सर्वप्रथम तपाईको रोगको कारण थाहा पाउनु भनेको:
यो तब हुन्छ जब मुटुको मांसपेशी गाढा हुन्छ, यसैले हृदय समस्या पैदा गर्दछ। त्यसकारण पछाडि र पुच्छर सहित शरीरका विभिन्न भागहरूले पर्याप्त रगत प्राप्त गर्न रोक्दा तिनीहरू कमजोर हुन थाल्छन्।
यदि बिरालाको रगतमा चिनीको स्तर छ भने, पोटेशियमको स्तर खस्छ किनकि यसले धेरै पटक पेशाब गर्दछ। यी पोटेशियम ड्रपहरू न्युरोपैथीहरूको कारणले हिंड्ने समस्या निम्त्याउन सक्छ.
यद्यपि यो कुकुरहरुमा अधिक सामान्य छ, हिप डिसप्लासिया बिरालाहरु द्वारा पनि पीडित हुन सक्छ; यद्यपि flines मा यो सामान्यतया वंशानुगत हुन्छ। यो हुन्छ जब हिप र फेमरको हड्डीहरू राम्रोसँग विकास हुँदैन, तिनीहरूलाई दुखाइ, लme्गडा पछाडि खुट्टा, दौडने वा जम्पि trouble, र crunching समस्या पैदा गर्दै।
जीर्ण कब्ज मुख्य कारण द्वारा मृगौला असफलता पछाडि हिर्काउने र राम्ररी हिंड्न गाह्रो हुने जस्ता लक्षणहरू हुन सक्छ। थप रूपमा, अरूहरू देखापर्दछन्, जस्तै भूखको हानी र / वा वजन र बान्ता।
यो रगतको थक्का हो जुन शरीरको केही भागमा रहन्छ। यदि यो पछाडि हुन्छ भने, रगत यसको खुट्टा राम्रोसँग पुग्दैन, ताकि तिनीहरू चिसो र थोरै गतिशील हुँदै।
हामीले सब भन्दा साधारण देख्यौं, तर त्यहाँ अरू पनि छन् जुन हामी भुल्न सक्दैनौं:
FIV, वा flines इम्युनोडेफिशियन्सी भाइरस
FIP, वा flines संक्रामक पेरिटोनिटिस
अवश्य पनि, उसलाई पशु चिकित्सकमा लैजानुहोस्। त्यहाँ एक पटक, उसले तपाईंलाई एक शारीरिक परीक्षा दिनेछ, र एक्स-रे वा अन्य इमेजि tests परीक्षणहरूको अर्डर गर्न सक्दछ तपाईंसँग के गलत छ भनेर पत्ता लगाउन।
त्यसो भए, तिनीहरूले तपाइँलाई औषधी दिन अगाडि बढ्नेछन् जुन लक्षणहरूलाई कम गर्दछ (वा उपचारको आधारमा, लक्षणहरू)। यदि तपाईं सँग फ्र्याक्चर छ भने, तपाईं यसलाई ठीक गर्न शल्य चिकित्सा छनौट गर्न सक्नुहुनेछ, र खुट्टा पट्टी।
र घरमा पनि तिमीले उसलाई धेरै माया गर्नु पर्छ, यो निश्चित गर्नुहोस् कि उसले राम्रोसंग खाए र पिए, र उनले आराम महसुस गरे।
किन मेरो बिरालो अनौठो हिंड्छ
सायद तपाईले याद गर्नु भएको छ कि तपाईको बिरालो अनौठो हिडिरहेको छ, सायद यो छैन कि उसको पछाडिको खुट्टा असफल भइरहेको छ, तर तपाई उसलाई हिंडिरहेको देख्नु भयो भने तपाईले केही गडबडी भएको महसुस गर्नुभयो।
त्यसो भए हामी तपाईंलाई केहि सामान्य रोगहरूको बारेमा कुरा गर्न जानेछौं जसले बिरालो हिंड्नेलाई असर गर्न सक्छ। ती रोगहरू हुन् जुन तपाईं ना you्गो आँखाले देख्न सक्नुहुन्छ, सायद उसको पछाडिको खुट्टा असफल भयो, ऊ चुप भयो, ऊ उठ्नलाई गाह्रो छ ...
यदि यो भयो भने तपाईंले आफ्नो बिरालोलाई पशु चिकित्सकमा लैजानुपर्नेछ, तर यो पनि महत्त्वपूर्ण छ कि तपाईंलाई उसलाई के हुन सक्छ जान्नु महत्त्वपूर्ण छ।
अटाक्सिया: स्ट्यागर सिन्ड्रोम
यदि यो तपाईंको बिरालालाई भयो भने, तपाईंले उसलाई पशु चिकित्सकमा लैजानुहुन्छ कि चिन्ता चक्कर लाग्न सक्छ। एटाक्सिया एक रोग हो जसले बिरालाको सामान्य चालको समन्वयलाई असर गर्दछ। यो वास्तवमा कुनै रोग होईन तर यो दिमागमा केही क्षति वा विकृतिको लक्षण हो जुन सीधा आन्दोलनसँग सम्बन्धित छ। यो जन्मजात हुन सक्छ।
यो त स्नायु प्रणाली को एक अराजक हो र बिरालाहरु मांसपेशि समन्वय को एक परिवर्तन प्रस्तुत गर्दछ, विशेष गरी पखेटा मा। त्यहाँ अटाक्सियाका बिभिन्न प्रकार छन्:
सेरेबलर एटाक्सिया। बिरालोले सेरिबेलममा एक जटिलता छ (क्षेत्रको सन्तुलन र चालको समन्वय नियन्त्रण गरिएको ठाउँमा)।
Vestibular ataxia। कानबाट मस्तिष्कमा जाने भित्री कान वा स्नायुहरूमा समस्याहरू छन्। बिरालाहरूले आफ्नो टाउको ढल्काउन सक्छ र अचम्मै तिनीहरूको आँखा सार्न सक्छन्। तिनीहरू सर्कलमा वा छेउमा जान सक्छन्। तिनीहरूले मिटर र बान्ता महसुस गर्न सक्दछन्।
सेन्सरी अटाक्सिया। यो तब हुन्छ जब दिमागमा समस्याहरू हुन्छन्, मेरुदण्ड र मेरुदण्डसँग जोड्नका लागि जिम्मेवार पेरिफेरल स्नायुहरू। बिरालो यसको खुट्टा व्यापक हिंडेर हिंड्न सक्छ।
Claudication: लंगडाई वा लंगडाई
बिरालाहरूमा हिंड्दा यो असामान्यता हो र जब बिरालो उच्च पोइन्टमा जान सक्दैन भने आफै पनि प्रकट हुन्छ। सब भन्दा साधारण अवस्था ती हुन् जुन हामी तल छलफल गर्दछौं।
खुट्टा प्याडमा चोटपटक। तपाईंलाई प्याडमा चोट लाग्न सक्छ।
हड्डीमा चोट लाग्यो। यो क्यासिकेसन समस्याको कारणले हुन सक्छ।
जोर्नी घाइते। तिनीहरू सामान्यतया भडकाउँछन्।
मांसपेशी भिन्नता वा परिवर्तन।
पौष्टिक परिवर्तनहरू अधिक भिटामिन ए को रूपमा
के गर्ने यदि मेरो बिरालो अनौठो छ?
अब हामी केहि बिन्दुहरूमा टिप्पणी दिन जानेछौं यदि तपाईको बिरालो अनौठो हिँड्दछ र तिमीलाई थाहा छैन कि उसलाई के हुँदैछ।
पशु चिकित्सकको परामर्श लिनुहोस्। गर्नका लागि पहिलो कुरा भनेको आफ्नो पशु चिकित्सकसँग कुरा गर्नु हो र तपाईंको बिचमा के भइरहेको छ वर्णन गर्नुहोस्।
कुनै पनि लक्षणको लागि हेर्नुहोस्। तपाईको बिरालोको पोष्ट, चाल, वा चाल पत्ता लगाउनुहोस् कि त्यहाँ कुनै असामान्यता छैन।
नेल नियन्त्रण। प्याडमा चोट नलगाउनुहोस् किनकि तपाईंको न nailsहरू राम्ररी बढ्न सक्छ र प्याडमा खन्नुहोस्।
खुट्टा प्याड चोटपटकबाट बच्नुहोस्। यो महत्त्वपूर्ण छ कि तपाईं आफ्नो बिरालोको ख्याल राख्नुहुन्छ र उनीहरूको प्याडमा आघात हुनबाट रोक्नुहोस्। कुनै पनि प्रकारको दुर्घटनाबाट बच्ने बाहेक। बिरालो जतिसक्दो सकेसम्म घर बाहिर जानु राम्रो हुन्छ।
जे भए पनि, तपाईंको बिरालो अनौंठो हिंडिरहेको छ वा खुट्टाको समस्यामा परेको छ भन्ने सोच्नुहोस्, तपाईंले आफ्नो पशु चिकित्सकसँग परामर्श लिनु आवश्यक छ ताकि उनीहरू सकेसम्म चाँडो स्वास्थ्य मूल्यांकन गर्न सकून्। उनीहरूले तपाईलाई के हुँदैछ भनेर नजिकबाट जाँच दिनेछन्।
केहि केसहरूमा कुनै पनि प्रकारको न्यूरोलजिकल र भास्कुलर समस्याबाट बच्नको लागि प्रारम्भिक पहिचानको आवश्यक पर्दछ, वा यहाँसम्म कि कंकाल समस्याहरू पनि।
लेखको पूर्ण मार्ग: Noti बिरालाहरू » बिरालाहरू » रोगहरू » किन मेरो बिरालोको पछाडिको खुट्टा असफल हुँदैछ?
के ती बिरालाहरूलाई मासिक धर्म हुन्छ?